Ngimfisela inhlanhla osaqashwa uMpengesi
sihle ndlovu | October 4, 2019
KUKHONA imisebenzi engingeke ngiyithathe noma kungathiwa ingaphindwa kayishumi imali engiyihola lapha ngikhona njengamanje.
Phela kwesinye isikhathi kubalulekile ukukhululeka enhliziyweni, ngakho akusizi ukujabulela ukuthi uhola kahle kodwa ekugcineni uthole ukuthi awujabule noma uyazi ukuthi ungakhonjwa indlela noma yinini.
Ngiyazazi ukuthi angazi lutho ngokuqeqesha ngoba into engiyiqondayo nengicabanga ukuthi ngiyenza kangcono yikona ukubhala lokhu engikwenza njengamanje. Kodwa futhi ngiyazi ukuthi uSiviwe “Chippa” Mpengesi angangiqasha ukuthi ngiyocija iqembu lakhe ngoba uyilo muntu anguye.
Ngihlale ngizibuza ukuthi wangena kanjani kunobhutshuzwayo uMpengesi ngoba kubukeka sengathi akazi ukuthi izinto zenziwa kanjani ebholeni. Mhlawumbe wathola isizumbulu semali wase elala, wavuka ekuseni wathenga iqembu engaqondile.
Njengoba ngithi angangiqasha nje yize ngingazi lutho ngokuqeqesha, yingoba ngibona sengathi into emjabulisa kakhulu wukuqasha nokuxosha abaqeqeshi, hhayi indaba yokulokhu ebhekisisa ukuthi umqeqeshi unamaphi amava.
Kodwa-ke noma angangishayela ucingo namuhla athi angizoqeqesha iqembu lakhe uzongiholela imali enkulu, ngeke ngilubhade lapho.
Ngibona sengathi uMpengesi ufuna kuphele isizini kuwuyena ohamba phambili ngesibalo sabaqeqeshi asebeke bacija iqembu lakhe noma aseke wabaxosha.
Ngiyazi ukuthi uma ungumphathi weqembu akukuphathi kahle ukulibona lishaywa ngoba usuke usebenzisa imali yakho ukuholela abantu osuke ubaqashile. Kodwa indlela agagamela ngayo uMpengesi ibuye ingishiye ngixakekile ukuthi kanti yena ucabanga kanjani.
Ngesikhathi kuqala isizini izintambo ziphethwe uClinton Larsen, bengizitshela ukuthi uMpengesi uzomyeka aqeqeshe iqembu ngoba uyena futhi owenze isiqiniseko sokuthi liyasinda ezembeni ngesizini edlule.
Nokho kusukile okudala kulo mbhemu wakwaMpengesi emuva kwemidlalo emihlanu, wamxosha uLarsen. Ngokwami bekungafanele athathe lesi sinqumo uma kubhekwa imidlalo ebisadlalwe yiChippa.
Angisho ukuthi amaqembu athathwa njengamakhulu kwi-Absa Premiership kumele avunyelwe kalula ukushaya lawo athathwa njengamancane.
Kodwa emidlalweni emihlanu edlalwe yiChippa kwangahamba ngendlela abebefisa ngayo abaphathi bayo, bekumele kubhekwe ukuthi idlale neMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates okungamaqembu amakhulu futhi adlala ibhola elihle.
Uxoshiwe-ke uLarsen kwabanjiswa uDaren Francis ohlale imidlalo emibili kuphela kwathiwa akagudluke.
Njengamanje sekukhona uNorman Mapeza waseZimbabwe engimfisela inhlanhla kodwa futhi ngiyazi ukuthi kukhona lapho ezoshayisana khona noMpengesi kungekudala.
Angisona isangoma kodwa ngibona sengathi uMapeza uyojika nje kwiChippa ngoba uzosebenzela indoda engenaso nakancane isineke.
Ngingakusho nje ngaphandle kokunanaza ukuthi uMapeza uzoxoshwa ingakapheli isizini kuqashwe omunye, naye ongeke ayiqede isizini eqeqesha iChippa. Vele-ke akadeli uMpengesi iqembu lakhe lingaqeqeshwanga abaqeqeshi abane ngesizini eyodwa.
Laphaya kwiChippa asikho isikhathi sokuthi umqeqeshi uyakha, usahlanganisa iqembu ukuze libambe isitayela sakhe. Kufuneka amaphuzu kuphela kwiChippa uma kudlula imidlalo emithathu iqembu lingawini uMpengesi usuke esecabanga ukuthi uzokuxosha kanjani.
Namanje ngisazibuza ukuthi ngabe uMpengesi wayecabangani ngesikhathi exosha uManqoba Mngqithi emuva kwemidlalo emibili nje kuphela eqashiwe.
Ngokubona kwami uMngqithi ungumqeqeshi ophambili kakhulu ngakho ngeke uvele umxoshe nje ngemuva kwemidlalo emibili, kungakhathalekile ukuthi iqembu lithole miphi imiphumela.
Ngake ngakusho lokhu phambilini futhi ngizokuphinda. UMpengesi kumele akujwayele ukuyophuza itiye nabantu abadala abafana noKaizer Motaung, usihlalo weKaizer Chiefs, Irvin Khoza, usohlalo wePirates noPatrice Motsepe, umengameli weSundowns. Angabuya ehlome ngolwazi lwebhola olukhulu emuva kokuhlala nala madoda.
Mina nje noma angathi angizogadela abadlali bakhe ijezi uMpengesi nginganqaba engakaqedi nokukhuluma. Ngeke nje ngiye kosebenza lapho ngazi khona ukuthi ngeke kuphele ngisho izinyanga eziyisithupha ngiwumsebenzi wakhona.
Angazi noma uMapeza uyazi yini ukuthi indaba yokwakha iqembu kumele akhohlwe iyona kwiChippa kungenjalo ibhantshi lizogcwala umoya. Ngimfisela inhlanhla.
* Phansi emgodini...kuloba uMhleli wezemidlalo uSihle Ndlovu